Danjire Micheal Keating oo si kulul uga hadlay qaraxyadii Muqdisho. – Radio Daljir
Danjire Micheal Keating oo si kulul uga hadlay qaraxyadii Muqdisho.
Febraayo 20, 2017 1:35 b 0
Muqdisho, Feb 19 2017-Ergeyga gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya Micheal Keatig ayaa si kulul uga hadlay Qaraxii shalay ka dhacay Isgoyska Kaawo-godey ee Degmada Wadajir.
Wuxuu ammaan u jeediyay shaqaalaha hay’adaha amniga iyo caafimaadka gurmadkii degdegga ahaa ee ay u fidiyeen dadkii ku waxyeelloobay qaraxa isaga oo soo jeediyay in caddaaladda la hor geeyo dadkii ka dambeeyay Qaraxaasi.
“Waxaan sii xoojineynaa taagerada aan ku taageereyno dadka Soomaaliyeed sida ay uga shaqeynaayaan xaqiijinta rajadooda ku aadan mustaqbal xasilooni iyo nabad ay ku dheehantahay.” ayuu raaciyay.
Micheal Keating ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoysaska iyo saaxiibada dhammaan dadkii dhibku ka soo gaaray Qaraxii shalay.
Farmaajo oo booqday dhaawacyada qarixii shalay lacagna u balanqaaday ciddii Alshabab soo sheegta.